Ghọta Ihe Nwepụ Ihe Igwe Igwe Igwe nke Ndị Ọrụ Na - arụ - OMG Solutions
Igwefoto kwesịrị ime ka mbelata nke ndị uwe ojii. Ndị nkatọ na-atụ egwu ihe dị iche. Nsogbu a bụ nke nwere otu akụkụ.
Akpu-igwe nke onye uwe ojii
O kwesịrị ije ije oge niile?
Ihe ndi mmadu na - eme ngwa agha bu ihe kachasi ike nke ndi uwe ojii. Otu steeti gọọmentị na-eme ugbu a na-emepụta ihe iwu kwadoro maka iji obere igwefoto n'ubu ma ọ bụ n'akpa uwe nke ndị uwe ojii. Ka ọ dị ugbu a, ndị uwe ojii kacha akwado mmepụta. Ma ọ na-eweta uru site na ihe gbasara iwu obodo gbasara ihe niile dabere na atụmatụ ahụ.
Site na igwe onyonyo di iche-iche nke etinyere n'ubu ndi uwe ojii, a ga-enyocha omume nke ndi oru a.
Ogo a bụ, iji gosi na ihe ziri ezi nke ndị uwe ojii, dị ka usoro ndị ọrụ si dị, na abụọ, iji zere omume ndị nwere ike ịme nrụrụ aka, yana ọnụ ọgụgụ atọ, nwekwara ezigbo akaebe mgbe ha mere mkpesa megide ndị uwe ojii.
Ndị uwe ojii kwenyere na idekọ njikwa ndị na - eme ka esemokwu na - ebelata ime ihe ike megide ndị uwe ojii. Ndị nkatọ na-enyo ihe dị iche na nke ahụ. Ndị na-eme ntụrụndụ na-a drunkụbiga mmanya ókè ma nwee ike kpasuo ndị ọzọ iwe maka iji ese foto. Ha nwere ike iru uda. Eleghị anya, ndị uwe ojii ga-abụ onye mbụ ga-akọ ma ọ bụrụ na ozu-cams na-ebute ma na-etinye ahụike nke ndị ọrụ nchekwa.
Nsogbu nke abuo bu ihe a na-akpo pre-recording. Nke mere na igwefoto igwefoto na nkeji gara aga dị - nke bara uru maka ịghọta ọnọdụ ahụ -, igwefoto ga-agba ọsọ mgbe niile. Ndị nchebe data na-ahụ ya dị ka njigide data ọhụrụ. Okwu a odi ka odi oke oke. Na njide nke data ekwentị, akparamàgwà nkwukọrịta nke mmadụ niile bipụtara ma ọ dịkarịa ala izu isii. N'ebe a, n'aka nke ọzọ, ọ bụ maka ịkpachapụ anya banyere ihe oyiyi na ụda nke naanị 60 sekọnd - na nke a n'ọnọdụ nke ndị uwe ojii anaghị eme na nzuzo kama n'ihu ọha.
Nsogbu kachasi ike bụ njikwa otu akụkụ. Maka na ọ bụ naanị onye uwe ojii na-ekpebi oge echekwara ebe ahụ kpamkpam. Ọ nwere ike ịgbanyụ igwefoto oge ọ bụla. Ndị uwe ojii na-eme nyocha nke ndekọ. Yabụ na, nchegbu ahụ doro anya na a na-edekọ ihe na - akpatara ndị mmadụ ahụhụ mana ọ bụghị ihe ọjọọ nke ndị uwe ojii. Ahụ-cam-ahụ agaghị abụ ebumnuche, mana ụzọ ntụgharị aka.
Nnyocha nke Mahadum Cambridge mere rụpụtara ihe dị ịtụnanya: mgbe ndị uwe ojii nwere ike ịgbanye ma ọ bụ gbanyụọ Body-cam, ike ndị uwe ojii ji pasent 73 mụbaa. N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na igwefoto na-agba ọsọ n'oge ngbanwe ahụ, iji ike agbadata pasent 36. Mgbapu nke puru iche di ka odi ka enwere ike mee ma oburu na aru agha ara aru ya. Ekwesịrị ka ekwurị na ndị ọrụ nchekwa data. Ndị uwe ojii nwekwara ike igosi n'oge a ma ọ bụ maka nchedo nke ndị uwe ojii ma ọ bụ ọdịmma nke ndị niile metụtara.
"Teknụzụ dị ya mere ọtụtụ ngalaba ndị uwe ojii na steeti na mba ahụ ga-enwe kamera ahụ, iji nweta vidiyo site n'aka ndị ọrụ anyị, iji hụ ihe ha na-anwa,"
Ndị uwe ojii ga-emerịrị tupu ha ejiri ma nakọkọta ihe ndekọ ndị a, chọpụta mgbe ha nakọtara ha, n'ọnọdụ ndị ha ga-eme ya, n'ọnọdụ ndị enyere ha ohere ịme, kedu ihe ha ga-eme ugbu a, etu na etu ha ga-esi mee ya. bibiri.
Ojiji nke igwe onyonyo nke aru putara ihe ndekọ nke ihe di omimi nke ihe anyo na anya tinyere mmekorita nke ndi mmadu. Na mmekọrịta ndị a, enwere ike ịdekọ aha, agbụrụ, agbụrụ, agba ma ọ bụ afọ mmadụ. Ndekọ ndị a, na mgbakwunye na teknụzụ ọhụrụ nke nyocha vidiyo na mmata ihu, na-enye ndị mmanye iwu iwu ka ha nwee ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya na njirimara mmadụ. Ozi ọ bụla gbasara "onye nwere ike ịmata" a na-ewere ozi nkeonwe dị ka nke Iwu Nchedo Ozi Nkeonwe na Iwu Akwụkwọ Electronic (PIPEDA).
Nkebi nke 7 nke PIPEDA na-enye na "enweghị ike ịnakọta ozi nkeonwe na-enweghị ihe ọmụma na nkwenye nke onye ọ bụla", belụsọ, n'etiti ihe ndị ọzọ, "nchịkọta a dabara adaba maka ebumnuche metụtara nyocha n'ime mmebi nke nkwekọrịta ma ọ bụ mmegide nke iwu gọọmentị etiti ma ọ bụ nke mpaghara “. Ma, ụjọ ọ bụla ndị uwe ojii na-ejide ndị mmadụ na-abụkarị nyocha adịghị. Na aha nkwanye ugwu na nzuzo nke ozi nkeonwe anyị, iji igwefoto anụ ahụ enweghị ike, ya mere, enweghị ike ịhapụ usoro iwu. Iji teknụzụ a eme ihe n'efu ga-emebi echiche nke nzuzo.
Ihe egwu nke mbuso agha nke nzuzo anaghị akwụsị ebe ahụ. Ọ bụghị naanị ndị ọchịchị ga-echekwa ụdị onye ị bụ, kamakwa ihe ị na-ekwu. Ọzọkwa, ọ dịghị ihe ga-egbochi igwefoto ahụ mmadụ ịdekọ ozi gbasara ndị na-agafe agafe-site na-enweghị ihe ọmụma ha. Teknụzụ a ga-abanyerịrị nke ọma n'ime ọha anyị ka ị ghara imebi izu nzuzo.
N'ime otu akwara, ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị ịghọta na esemokwu ese foto na-eche echiche ndị ọzọ n'ime. Na mgbakwunye na ihe gbasara iwu, ịnwe igwefoto ahụ ga-anọchi anya itinye ego oge na akụrụngwa na ngalaba ndị a metụtara.
Ihe ịma aka dị iche iche bụ ịnakọta nkwupụta nke ndị akaebe na ndị metụtara. Anyị achọpụtala na ndị mmadụ anaghị achọ ịgba akaebe dị ka ndị aka ebe n’ihi na ha ma na a na-ele ha vidio. Peoplefọdụ ndị mmadụ anaghị ekwusi ike ka edekọ ha. Ndị ọzọ na-anwa ịchebe anya igwefoto. A ghaghị iji igwefoto rụọ ọrụ na aka ya bụ ihe ịma aka n'onwe ya. Maka… ndị isi ndị na-enwetụbeghị ha, ha ga-amụta otu ha si arụ ọrụ ma cheta otu esi eme ya na ọnọdụ nsogbu. Nnyocha ahụ gosiri na ndị isi chọrọ ihe ma ọ bụ obere ọkara afọ maka omume ịgbanye igwefoto na-aghọ ihe okike.
Nzuzo 6688 1 Echiche Taa